Mazuva Matsvene Okugadzwa muLatin Rites
Chitendero & Kunamata Mazuva Matsvene & Mazororo
Tumi yemitambo yakakosha yegore
Ichechi yeKaturike ikozvino ine Mazuva Matsvene gumi Ezvakatarisirwa , ayo akanyorwa muCanon 1246 ye 1983 Code yeCanon Law. Aya Mazuva Matsvene gumi Ezvakatarisirwa anoshanda kuLatin Rite yeChechi yeKaturike; veMabvazuva Rites vane mazuva avo matsvene ekugadzwa. Mazuva Matsvene ekugadziriswa mamwe mazuva kunze kweSvondo apo maKaturike anodiwa kuti vatore muMisa , mararamiro edu makuru ekunamata. (Mutambo upi zvawo wakapembererwa musi weSvondo, wakaita saIsita , unowira pasi peSvondo redu reSvondo uye naizvozvo hauna kubatanidza muurongwa hweMazuva Matsvene Ezvakatarisirwa.)
Runyora urwu runotevera runosanganisira gumi gumi emazuva matsvene emitoro yakatarwa yeLatin Rite. Mune dzimwe nyika, nekutenderwa kweVatican, musangano webhishopu unogona kunge wakaderedza huwandu hweMazuva Matsvene Ezvakatarisirwa, kazhinji kuburikidza nekuendesa kupemberera kwemabiko akaita seEpiphany , Ascension , kana Corpus Christi kuSvondo iri pedyo, kana dzimwe mamiriro ezvinhu, sezvakaitwa mumitambo yaSaint Joseph uye yaVatendi Petro naPauro, nokubvisa zvavanosungirwa zvachose. Nokudaro mamwe mazita eZvene Mazuva Okugadzirirwa kune dzimwe nyika inogona kusanganisira mazuva mashoma gumi ekubatira. Kana usina kusahadzika, ndapota chengeta pa "Ndiyo [ zita rezuva dzvene ] Zuva Rinofanira Kupiwa?" mune zvakarongwa pasi apa, kana chengetera neparisheni yako kana diocese.
(Musangano webhishopiti wenyika unogonawo kuwedzera Mazuva Matsvene ekutarisirwa kukereke, kwete kungovabvisa, kunyange izvo zvisingaitiki.)
Iwe unogona zvakare kutarisa mazita anotevera maZvitsvene Ezvinyorwa kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana:
Mazuva Matsvene Okugadzwa muUnited States
Nzvimbo yaMaria, Amai vaMwari
Madonna ekuzvininipisa naFra Angelico, c. 1430. Public Domain
ILatin Rite yeChechi yeKaturike inotanga gore nekupemberera Chigaro chaMaria, Amai vaMwari . Pazuva rino, tinoyeuchidzwa nezvebasa iro Mhandara Yakaropafadzwa yakaronga muurongwa hwekuponeswa kwedu. Kuberekwa kwaKristu paKrisimasi , kunopemberera kwevhiki imwe chete zvisati zvaitika, zvakaitwa kuti zvive nyore nemoto waMaria: "Ngazviitike kwandiri maererano neshoko renyu."
NdiJanuary 1 Zuva Rinofanira Kusungirwa Here?
Epiphany yaIshe wedu Jesu Kristu
A preseppe (Chiitiko cheNativity) chaiva neMadzimambo Mashatu muchechi muRome, Italy, munaJanuary 2008. Scott P. Richert
Mutambo weEpiphany waIshe wedu Jesu Kristu ndeimwe yemhemberero dzekare dzechiKristu, kunyange, mumazana emakore, yakapemberera zvinhu zvakasiyana-siyana. Epiphany inobva muchiito chechiGiriki chinoreva "kuzarura," uye zviitiko zvose zvakasiyana-siyana zvinopembererwa neMutambo weEpiphany zvizaruro zvaKristu kuvanhu.
Iko Epiphany Mutsvene Mutsvene Wechiroro?
Mutemo weSt. Joseph, Murume weMakomborero Maria
Statue yaSaint Joseph muLourdes Grotto, St. Mary Oratory, Rockford, IL. Scott P. Richert
Nzvimbo yeSt. Joseph, Murume weMhandara Maria Akaropafadzwa, inopemberera hupenyu hwebaba vaJesu Kristu.
Rini Zuva raJosefa Josefa?
Kukwidzwa kwaShe wedu
Kukwidzwa kwaShe wedu, Mutumwa mukuru Michael Church, Lansing, IL. frted (CC BY-SA 2.0 / Flickr
Kukwidzwa kwaIshe wedu , kwakaitika mazuva makumi mana mushure mokunge Jesu Kristu amuka kubva kuvakafa paSvondo yePasika , ndicho chiito chekupedzisira chekuregererwa kwedu kuti Kristu akatanga musi weChishanu Chishanu . Pazuva rino, Kristu akamuka, pamberi pevaapositori vaKe, akakwira mumuviri muDenga.
Kukwidzwa Kwezuva Rinofanira Kupiwa Basa Here?
Papa Benedict XVI anoropafadza boka revanhu neEucharist pamusangano uye kunyengetera nevana vakagadzira First Communion muna 2005 muSt. Peter's Square, Gumiguru 15, 2005. Vana vanenge 100 000 nevabereki vakapinda mutambo. Franco Origlia / Getty Images
Mutemo weCorpus Christi , kana Mutambo weMutumbi neropa raKristu (sezvazviri kunowanzonzi nhasi), rinodzokera kuzana remakore rechi13, asi rinopemberera chimwe chinhu chakwegura: sangano reSakramente reMutambo Mutsvene paChekupedzisira Kudya paSvondo Tsvene .
Mutemo weVatendi Petro naPauro, vaApostora
Shanduro Pauro Kushanyira Saint Peter mujeri neFilippino Lippi uye Detail rekumutsa Mwanakomana weTheophilus naMasaccio. ALESSANDRO VANNINI / Getty Images
Nheyo yeChishanu yaPetro naPauro, vaApostora (Gumiguru 29), inopemberera vaapositori vaviri vakuru, avo vakafira kutenda kwekutanga kweChechi yeRoma.
The Dormition yeNzvimbo Tsvenetsvene Theotokos, Central Central icon, kumavambo kwema1800. Slava Gallery, LLC
Izvo Zvekare yeAsumption yeMhandara Vakaropafadzwa Mariya ibasa rekare reChechi, rinopembererwa munyika yose nezana remakore rechitanhatu. Iyo inorangarira rufu rwaMariya nemafungiro ake mumuviri kuDenga muviri wake usati watanga kuora-chirevo chekumuka kwedu mumuviri pakuguma kwenguva.
Ndeipi Mutambo Wekufanirwa?
Inofungidzira izuva dzvene rokusungirwa here?
Central Central icon icon (munenge pakati pemakore ekuma1800) evasanangurwa vakasarudzwa. Slava Gallery, LLC
Zuva Rose Vatsvene ndeyemutambo wekare. Yakasimuka kubva mumitambo yechiKristu yekupemberera kuurayiwa kwevasande pamusi wekufa kwekufira kwavo. Apo kuurawa kwakawedzerwa munguva dzekutambudzwa kweHumambo hweRoma hwekupedzisira, maDooceses emunzvimbo mavo akaisa mutambo wezuva rimwechete kuitira kuti ave nechokwadi chokuti vose vakafira mhondi, vanozivikanwa uye vasingazivi, vakakudzwa zvakafanira. Muitiro wacho wakazopedzisira wapararira kuChechi yose.
Zuva Ripi Vasande Vose?
Vose Vatsvene Vasikati Zuva Rinofanira Kusungirwa Here?
Izvo Zvekare zveMusingafungidzirwi Conception
Chifananidzo cheMhandara Maria Wakaropafadzwa sezvaakaonekwa kuLourdes, France, muna 1858, apo akazivisa, "Ndini Immaculate Conception." Shrine yeSamramente Yakanakisisa, Hanceville, AL. Scott P. Richert
Icho Chirevo cheMweya Mutsvene , chimiro chayo chakarekare, chinodzokera kuzana remakore rechinomwe, apo machechi muEast akatanga kutamba Mutambo weChina chaSanta Anne, amai vaMaria. Mune mamwe mazwi, mutambo uyu unopemberera, kwete kubata kwaKristu (kazhinji kusina kururama), asi kubata kweMhandara Mhandara Mariya muchibereko cheSaint Anne; uye mwedzi mapfumbamwe gare gare, musi waSeptember 8, tinopemberera Kuberekwa kweMhandara Maria Akaropafadzwa .
Ndeipi Mutambo Wechiratidzo Chisingaoneki?
Icho Chisinganyatsogadziriswa Chigadziro Chitsvene Chinodiwa Here?
Chimiro chekuzvarwa kweKrisimasi 2007 pamberi peatari huru paBaslica di San Lorenzo fuori le Mura, Rome, Italy. Scott P. Richert
Izwi rokuti Krisimasi rinobva mukubatanidzwa kwaKristu naMisa ; iyo mutambo wekuzvarwa kwaIshe wedu noMuponesi Jesu Kristu. Zuva rokupedzisira dzvene rezvisungo mugore, Krisimasi yechipiri inokosha mukurenda ye liturgical chete kuIsita .
Krisimasi Izuva Rinofanira Kupiwa Basa Here?
Apo Is Ash Chitatu?
Icho Chimiro chaMaria, Amai vaMwari
Makatorike Anopemberera Mutambo Wedukadzi weGomo reKarimeri musi waJuly 16
Mercy Divine Sunday
Ko Katurike anofanira Kushanda paSvondo muLent?
Kuverenga kweMagwaro kwevhiki tsvene
Chii chakaita kuti Groundhog Ione Shadow Yake?
Munyengetero wekuzvarwa kwaMhandara Maria Wakaropafadzwa
Cold War: USS Saipan (CVL-48)
Top Top 10 Dzidziso Yakawanda Zvikanganiso Chevadzidzisi Kudzivisa
Sweet Briar College GPA, SAT uye ACT Data
Imhosva Yorufu Inouraya Here?
Paruzhinji Kutaura Kuzvidya Mwoyo
Bilingual America Football Glossary
Kunyatsonzwisisa uye Kufananidza Kubatsira
The Most Famous Dance Choreographers of Past and Present
Endoplasmic Reticulum: Maitiro uye Basa
Mufambiro weEco-Friendly Car Washing
Nzira Yokufananidza "Tsanangura" (kuti Tsanangura) muchiFrench
Painting Ganda Tones
History of the Empire of Chola Empire
Kupiswa Alive: Jessica Chambers
Kusiyana Pakati Perusununguko Kubva Chitendero uye Rusununguko rwechitendero
Nzira Yokunyora Nheyo dze Daily Living Skills: Utano uye Kuchenesa
Mabhuku pamusoro pevakadzi mu Prehistory
Mexican-America War 101
Adverb (Adverbial) Chirevo Definition uye Mienzaniso